छोरा–छोरी बराबरी कहिले हुने ? मनछुने सत्यघटनामा आधारित सन्देशमुलक घटना ! भिडियो सहित - All Nepal
छोरा–छोरी बराबरी कहिले हुने ? मनछुने सत्यघटनामा आधारित सन्देशमुलक घटना ! भिडियो सहित
छोरा मान्छेलाइ गर्ने ब्यावहार र छोरीलाई गर्ने ब्यावहार समाजमा अझै पनि आकास पतालको फरक देख्न सकिन्छ । हरेक कुरामा छोरालाई नै पढि प्राथमिकता अहिले पनि सबैले दिन्छन् । छोरा पाउने आशै आसमा एक बर्षको तिन पटक समेत गर्भपतन गराएका उदाहरण तमाम पाउन सकिन्छ ।
जिल्लाका जान्ने बुझ्नै धेरै जस्तो ब्यत्तीहरु, राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु सबै कुरा र भाषण गर्दा छोरा छोरी बराबर हुन् भनेर अहिले पनि भन्न छोडेका छैनन् । तर यस्तै जान्ने बुझ्ने ब्यत्तीहरुले नै ब्यवहारमा लागु गर्न सकेका छैनन् । छोरा छोरीलाई गर्भबाट नै विभेद हुन थालेको पाउन सकिन्छ । छोरा भए जन्म दिनु छोरी भए गर्भपतन गराउनु यस्ता धेरै उदाहरणहरु समाजमा देख्न पाइन्छ ।
यस्तै छोरा छोरीबीच स्वास्थ्य शिक्षा, खानपान हरेक कुरामा भिन्नता देख्न सकिन्छ । सहर बजार गाँउ घर चारै तिर आमा बुबा दाजु भाई सबै सबैले छोरा र छोरीमा गर्ने विभेदले अहिले पनि जरो गाडेको अवस्था छ । छोरा मान्छेलाई समान्य ज्वरो आउदा होस, टाउको दुख्दा होस सामान्य विरामी पर्दा स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन्छन् । आदी आदी घटनाको कथा बेथालाई सुदूर खबर सहकर्मी डिबी बिष्टले बझाङ्गमा रहेका महिला दिदी बहिनीको दुखेसोलाई यसरी उठान गर्नुभएको छ । सबैको मन मस्तिस्कमा छोरा-छोरी बराबर हुन भनि सन्देश पुगोस ।